Qoor Qoor oo Farmaajo warbixin ka siiyay kulamadii Garoowe | KEYDMEDIA ONLINE
Qoor Qoor oo Farmaajo warbixin ka siiyay kulamadii Garoowe
Madaxweynaha Galmudug ayaa maamulka uu hogaamiyaha u yahay dayacay, isagoo mudo 3 bilood ah u shaqeynaya sidii Wasiir katirsan Xukuumadda Federaalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa Villa Somalia kula kulmay Farmaajo, isagoo siiyay warbixin ku aadan wixii kasoo baxay kulamadii uu Garoowe kula yeeshay musharixiinta Mucaaradka.
Illo ku dhaw kulanka, ayaa Keydmedia Online u sheegay in Qoor Qoor ka dalbadey Farmaajo inuu kulan deg deg ah qabto, maadaama dhinacyadii uu wadahadalka lasoo qaatey ay mujiiyeen ogolaansho ah in wadahadal laga yeesho khilaafka doorashadda.
Shaqsiyaadka uu lasoo kulmay waxaa kamid ah Xasan Sheekh, Sheekh Shariif, Xasan Cali Khayre, Axmed Madoobe, Deni iyo Musharixiin kale oo miisaan ku leh siyaasadda dalka.
Farmaajo ayaa la sheegay inuu ka caga-jiidayo inuu sameeyo tanaasul, si uu wadanka uga gudbo marxaladdan is-mariwaaga ah ee hortagan qabashada doorashada, iyadoo arrimaha ugu wayn ee la isku hayo ay yihiin Gedo iyo gudiga doorashooyinka.
Mucaaradka oo ay wehliyaan Jubbaland iyo Puntland ayaa diiday inay ka qeyb qaataan doorashadda, iyagoo ku eedeeyay Farmaajo inuu ka baxay heshiiskii doorashadda 17-kii September 2020 lagu gaarey Muqdisho.
Madaxweyne Qoor Qoor ayaa mas'uuliyadii Galmudug u dayacay u adeegida Farmaajo, oo u noqday ergayga u qaabilsan wadahadalka mucaaradka iyo dhex-dhexaadinta, taasoo uusan wax natiijo ah ka keenin illaa hadda, maadaama meeshii hore ay dhinacyada kala joogaan.
Soomaaliya ayaa ku jirta marxalad hubanti la'aan ah mustaqbalkeeda, waxaan sii nuxuusaya rajadii shacabka ee doorashadda, oo watigii la filayay inay dhacdo la dhaafay, islamarkaana taladii dalka isku soo koobay Farmaajo.
0 Comments Topics: farmaajo galmudug qoor-qoor soomaaliya